Tànana efa zatra mitsotra
Ny fifidianana solombavambahoaka no tena hifantohan’ny saina ato ho ato. Somary ho takona ny toe-draharaha politika samihafa, fa hiompana bebe kokoa amin’io ny mason’ny rehetra.
Kimaizimaizina no lehibe indrindra
Ny fitiavana no lehibe indrindra, hoy ilay teny ao anatin’ny soratra masina nentina natao fitaovana politika teto amin’ny firenena Malagasy.
Mitovy amin’izay koa ny mety ho fihetseham-po rehefa mahita sarina kandida samihafa aranty amina fiara tokana. Toa tsy mampino raha sitraky ny kandida ho filoham-pirenena vonona ny ho lany amin’ny fifidianana no mankasitraka fomba fampielezan-kevitra tsy nisy nanao toy izany. Izay tokoa angamba ny dikan’ilay fomba filaza hoe mihodina ny tany na mihodina ny daty, araka ny filazan’ny mpanakanto azy. Mba anjaran’ny valalabemandry indray ny manao izay mahafanina ny mpanao politika mandritry ny volana sy andro maromaro. Jerena tany amin’ny fotoam-panomanana ny fifidianana, mba tsy hilazana ho nandritry ny fampielezan-kevitra nialoha ny fotoana, toa hita ho samy nahazaka vahoaka daholo na Hendry io na bodo na adala. Tonga anefa ity ny fotoana fampielezan-kevitra, toa samy zara raha misy mpanotrona indray ny ankamaroany na aiza na aiza alehan’izy ireo. Ny sasany amin’ireo izay nanandra-tena ho nahazaka vahoaka aza nalaza sahady fa saika niharana hatezeram-bahoaka satria tsy nahaloa ny volan’ireo nokaramainy ho vahoakany. Tsy mbola misy afaka milaza azy ho mpandresy, araka izany, hatreto fa ny aorian’ny fifidianana ihany no azo hitsarana izay tena mamim-bahoaka marina. “Mba hampalahelo ny sambatra” amin’ity volana ity.